Al-Shabaab oo sheegtay in ciidamo badan ay Kenya iyo Mareykanka uga dileen saldhiggii ay ku weerareen – Hornafrik Media Network
Ururka Al-Shabaab ayaa war ka soo saaray khasaaraha ka dhashay weerarkii ay waaberigii hore ee saakay ku qaadeen saldhig militeri oo ay ciidamo iskugu jira Mareykan iyo Kenyaan ka deganyihiin deegaanka Manda Bay gobolka Lamu ee dalka Kenya.
Bayaan ku qoran luuqadaha English iyo Carabi oo goor dhaw ka soo baxay Al-Shabaab, isla markaana ay ku baahiyeen warbaahintooda ayaa waxay ku sheegeen in khasaare iskugu jira naf iyo maalba ay weerarkaas ugu geysteen ciidamadii ku sugnaa saldhigga.
Al-Shabaab warkooda waxay ku sheegeen in weerarkaas ay ku dileen 17 askari American ah iyo sagaal kale oo ka tirsanaa militeriga Kenya ee (KDF) loo yaqaan.
Sidoo kale waxay sheegeen inay ku burburiyeen weerarkaas todoba diyaaradood oo kuwa dagaalka ah iyo in ka badan shan gaari oo kuwa militeriga ah.
Al-Shabaab waxa ay sheegeen in qeybo badan oo saldhigga Simba ka mid ah ay gubeen, soo afjaridda weerarkaasna ciidamadii ku sugnaa saldhiga ay ku qaadatay in ka badan 10 saacadood oo xariir ah, sida ay hadalka u dhigeen.
Ugu dambeyntii bayaanka Al-Shabaab ayaa lagu dhaliilay sida gabi-dhacleynta leh oo ay sheegeen in taliska AFRICOM uu marar badan oo maanta ah uga hadlay weerarkaas.
Halkan ka akhriso qoraalka Al-Shabaab oo English iyo Carabi ah
Sarkaal sare oo caawa lagu qarxiyey waqooyiga Gaalkacyo